'Rajiimka' Farmaajo oo caburin ku haya Warbaahinta Xorta ah | KEYDMEDIA ONLINE
5 December 2020 Trump oo bixiyay amar Ciidanka Mareykanka looga saarayo Soomaaliya
MUQDHISHO, Soomaaliya - Warbaahinta, gaar ahaan wariyeyaasha Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa faro ku gambad ah, waxaana ay yihiin kuwo xilli walba fisha dhibaato kasoo gaartay DFS.
Tan iyo markii dowladda Farmaajo ay talada dalka qabsatay, waxaa jiray tacaddiyo, dhibaato iyo cago-jugleyn lagu haayey saxaafadda xorta ah, Keydmedia Online ayaa marar badan ka hadashay caburinta lagu hayo Saxaafadda iyo Xoriyatul qowlka.
Gacanta dowladda gaar ahaan NISA waxaa ku jira maalintii shannaad Wariye Cabdullaahi Kulmiye Caddow oo loo haysto gudashada waajibaadkiisa.
Wariyahan ayaa wareystay Ganacsade Xaaji Abukar Cumar Caddaan, oo sheegay inuu taageersan yahay fekerka Al-Shabaab, islamarkaana ku faraxsan yahay weerarada lagu qaadayo AMISOM. Waxay NISA xirtay ganacsadahan iyo sidoo kale wariyaha, balse ganacsadihii hadalka sheegay waa lasii daayey, waxaana xabsiga ku jira wariye Cabdullaahi Kulmiye.
Farmaajo ayaa u arka warbaahinta iney cadow yihiin, isaga oo dhanka kalena horraantii bishan sheegay ineyba wariyeyaasha u badan yihiin Al-shabaab.
Farmaajo ayaa intii aanu noqon Madaxweynaha Federaalka, wuxuu ahaa mucaarad habeen iyo maalin soo taagan warbaahinta, wuxuuna u arkay iney yihiin kuwo saxan, balse taasi bedelkeeda wuxuu u arkaa maanta iney Al-shabaab yihiin.
Dhanka kale, ururada saxaafadda Soomaaliyeed ayaa si kulul u cambaareeyey xarigga wariye C/laahi Kulmiye Cadow, waxaana ay ku sheegeen inuu yahay mid wax u dhimaya xurriyatul qowlka.
NISA ayaa xarigga wariyahan u adeegsatay wariyeyaal kale oo iyada la shaqeeya, kuwaasi oo soo basaasay halka uu deggan yahay iyo sidoo kale xaqiijinta inuu hoygiisa joogay, sida ay ogaatay Keydmedia Online.
Cabdullaahi Kulmiye ayaa ka tirsan shaqaalaha Radio Kulmiye oo ah Idaacadda ugu weyn magaalada Muqdisho, looguna jecel yahay dhageysigeeda.
Radio Kulmiye ayaa hadda waxay maalinta berrito u ballamisay dhageystayaasheeda in maqal iyo muuqaal ahaanba u baahin doonaan wareysiga sababay in la xiro wariye Cabdullaahi Kulmiye, iyadoo taasi laga yaabo iney dhibaato kale u keento warbaahinta.
Doorka Fahad Yaasiin
Agaasimaha NISA Fahad Yaasiin ayaa aad ula dagaalsan suxufiyiinta Soomaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Muqdisho, wuxuuna u arkaa iney yihiin kuwo shaqadiisa cadow ku ah.
Fahad ayaa xilli uu u shaqeynayey Aljazeera wuxuu wareysi la yeeshay hoggaamiyeyaal badan oo Al-shabaab ah, mana jirto cid xirtay ama dhibaato kale u geysatay. Hadaba arrintu miyey tahay kaa xoog badani, iyo ku tagrifalka shaarka dowladeed.
Hase yeeshee wuxuu hadda bilaabay u cago jugleynta warbaahinta madaxa banaan, waxayna middaasi muujineysaa in dalka uu ku jiro nidaam milatari.
NISA iyo guud ahaan hay'adaha ammaanka dowladda ayaa caburiye suxufiyiinta Soomaaliyeed, walibana u awood sheegta.
Ururada saxafadda caalamiga ah ayaa aad ugu baaqaya in lasii daayo wariye C/laahi Kulmiye Cadow, sidoo kalena dowladda Soomaaliya ay joojiso dhibaatada ay habeen iyo maalin kula dhaqaaqdo suxufiyiinta.
0 Comments Topics: farmaajo nisa